အိပ်မက်မြေရဲ့တစ်နေရာ….
Posted by တလနွန် at Monday, June 21, 2010 Labels: ကဗျာ , ခံစားမှု
Credit to http://www.wunderground.com/
လေညှင်းခတ်တဲ့ တိမ်တစ်စအဖြစ်နဲ့ 
လင်းထင်းဖြာကျော့ မင်းယိမ်းနွဲ့ လိုက်တဲ့အခါ
ကြွေဆင်းကျလာတဲ့ တိမ်ရိပ်ဖြူတရုံနဲ့ တင်
(ဘလော့နှင့် တစ်လကျော်ကျော်ဝေးခဲ့ပြီးပြီး...နောင်လည်း ဆက်ဝေးဖြစ်နေအုံးမယ်...အလုပ်သစ်မှာ လူသစ် နေရာသစ်နဲ့နေသားကျလုလု... အဲဒါနဲ့သံယောဇဉ်မပြတ်တဲ့ ဒီဘလော့ပေါ် ကဗျာတစ်ပုဒ် ချရေးဖြစ်မိတယ်...ကဗျာလို့ မည်ပါ့မလားမသိ :D သတိတရနဲ့ လာလည်ကျတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးပါဗျာ )
Posted by တလနွန် at Monday, December 28, 2009 Labels: ကဗျာ
သုညကြွင်းတော့မဲ့ ကမ္ဘာနေ့ ရက်ရောက်ခဲ့ရင်
ရက်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်ပဲ ကမ္ဘာမြေကြီးက သက်တမ်းကျန်တော့တယ်တဲ့လား ?? ဒီသတင်းက မိခင်ကမ္ဘာမှာ မှီခိုနေကြတဲ့ သတ္တ လူသား တွေအတွက် အတွေးတစ်ခုတော့ အရည်ပျော်စေခဲ့သည်တော့ အမှန်။ ဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်၏ မဖြစ်၏ ကယက်တစ်ခုထပွက်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ ထိုနောက်ကွယ်မှာလည်း ယုံကြည်၏ မယုံကြည်၏ သည် လူသားတွေကြားမှာ လှိုင်းတစ်ခုတော့ ထခဲ့မည်သာ။
တိကျသေချာခြင်းမရှိတဲ့ ဒီဝိုးတဝါးသတင်းမှ အလင်းတစ်ခုထွန်းညှိပေးလိုက်သလို ရှိစေခဲ့သည်ကတော့ မုချအမှန်ပင်။ ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ တစ်နေ့ နေ့ တော့ သေခြင်းနိုင်ငံသို့ပါမစ်မလိုပဲ ကူးရအုံးမည်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ တွေဟာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ အမှောင်တွေရဲ့ ကြားမှာ ရပ်တည်ရှင်သန်ရင်း သေ ဆုံးခြင်းဆိုတာကို ကိုယ်နှင့်လားလားမှ မဆိုင်သလို မေ့လျောထားခဲ့မိတာကြာပြီးမဟုတ်ပါလော ( ၇၀% သော လူသားများအတွက်သာ။ ဤကား စာရေးသူ၏ စကားချပ် :D )
ရော်ရွက်ဆိုတာ အချိန်တန်ုလို့ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နွေလေရူးကျီစယ်လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် ကြွေရမည်မှာ ဓမ္မတာပဲမဟုတ်လား။
အခုလည်း ကပ်ဆိုးတစ်ခုကြုံလို့ကမ္ဘာမြေကြီး အိပ်စက်အနားယူတော့မည်ဆိုရင် မှီခိုသူ ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများသည်လည်း အတူတူလောင်ကျွမ်းကွယ်ပျောက်သွားပေတော့မည်။ အဲဒီလို အခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် ဘလော့သူဘလော့သားထဲက ကျွန်တော်လည်း တဂ်ပို့ ထဲက မေးခွန်းတွေအတိုင်း စိတ်ထဲကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဖီလင်တွေ ချရေးကြည့်မိပါတော့တယ်……………..(မခရေညို တဂ်ထားတာ နောက်ကျမှရေးဖြစ်တဲ့ အတွက် တောင်းပန်ပါ၏)
မခွဲခွာရခင်တော့ ချစ်သူခင်သူအားလုံးနဲ့အတူတူရှိနေချင်တယ်။
နောင်ကမ္ဘာသစ်ဖြစ်တည်ခဲ့ရင်တောင် ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ဆုံနိုင်ပါအုံးမလားလို့ ပါ။
မေတ္တာလက်နက်ကအစွမ်းထက်ဆုံးလို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော့်ယုံကြည်မှုကြောင့် လုံခြုံနေမှာပါ။
ကမ္ဘာပျက်လို့နာနာကျင်ကျင်အော်ဟစ်တဲ့အသံတွေ။
လောင်ကျွမ်းပျက်စီးနိုင်တဲ့ အရာတွေထက် စိတ်ထဲမှာ လုံလုံခြုံခြုံသိမ်းနိုင်တဲ့ သရဏဂုံ။
ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့ရှင်ခြင်း သေခြင်းက ရုပ်သေးဆရာရဲ့ကကြိုးကကွက်နဲ့ တူနေသလိုပါပဲ။
မိဘအတွက် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ သားတစ်ယောက်မဖြစ်ခဲ့တာတောင် အထိုက်အလျောက်တော့ ဂုဏ်ယူပီတိဖြစ်စေခဲ့ပြီး။
သေခြင်းက လက်တကမ်းအလိုမှာပဲရှိတော့တယ်။ သေချာတာကတော့ သာမာန်ထက် ဝင်သက် ထွက်သက် ပြင်းပြင်းနဲ့ကျုးရင့်နေမိမှာပဲ :D
2012 The End Of The World ? -
Posted by တလနွန် at Thursday, November 05, 2009 Labels: Tag
စာပေတွေ တသွင်သွင်စီးဆင်းနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နှစ်ခြိုက်ခုံမင်စွာ ရွှက်လွှင့်နေသူတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ~~
~ သုတ ရသ များစွာရှိရာ ~